इन्द्रबहादुर राईलाई २२ थान झुर प्रश्न
२०७४ फागुन २६ शनिबार ०९:३७:००
२२ प्रश्नमा इन्द्रबहादुर राईले १७ वटाको मात्र उत्तर दिए । थरथर कामेका हातले ती लेखेका हुन् । उनका हस्ताक्षर हेरेपछि मलाई लाग्यो, मैले उनलाई सास्ती नै दिएछु ।
यसै पनि तिनलाई पठाइएका प्रश्नहरू उत्तर दिन लायक थिएनन् । किनभने तिनी चाहन्छन्, अन्तर्वार्ताकारले उनीहरूले लेखेका कृतिहरू पढेर, बुझेर टेक्स्टभित्रबाट प्रश्नहरू गरून् । मैले जम्मै प्रश्न टेक्स्टबाहिरबाट गरेँ । अनि पाउँछु त उत्तर ?
टेक्स्टभित्रबाट तिनलाई गरिएका हजारौँ प्रश्न र र उत्तरहरूबाट दिक्क लागेको थियो । के छ अब तेस्रो आयाम र लीलालेखनबारे गरिनुपर्ने प्रश्नहरू ? अब अरू सरोकारका कुराहरू गरौं, यस्तो लाग्यो मलाई ।
कवि नीमा शेर्पा र म पुग्दा इन्द्रबहादुर राई कोठैमा थिए ।
"कहाँबाट आएको हो ? को हो, मैले त चिनिनँ ।"
तिनको यो प्रश्न थियो, हाम्रो दुर्भाग्य थियो । तिनले नचिनेपछि हामीले 'हामी पनि कवि हौं नि, दार्जीलिङको' भनिदियौं ।
"ए.." बुझेको तिनको टाउको हल्लियो ।
"२०१२ को साहित्य एकादमी युवा पुरस्कार पाएको हो सर, यिनले," चिनी पो हाल्छन् कि भन्ने लागेर हो कि नीमाले यसो पनि भनिदिए । भनिसकेर नीमाले मलाई हेरे, मैले 'यसो त नभनेको भए नि हुने' किसिमले हेरिदिएँ ।
"खै कसकसले के के पुरस्कार पाउँदैछन्, के के लेख्दैछन् । आफू त आफ्नै विचारको...," तिनले भने, "खै आफैँले विचार गरेको लेख्नै दिँदैनन् ।"
नेपालमा पुस्तान्तरको समस्या नरहेको सम्बन्धमा केही महिनाअघि काठमाडौंमा नीमा र मैले कुरा गऱ्यौं । त्यही कुरा इन्द्रबहादुर राईको घरमा पनि सम्झियौं ।
नेपालमा तीन पुस्ताबीच जोडिएको 'सम्बन्ध' आफैँले देख्यौँ । आफ्नै पुस्ताबाट बैरागी काइँलालाई सोझै 'बैरागी काइँला' सम्बोधन गरेको सुनेर हामी हेराहेरसमेत गरेका थियौं । हामी यता सम्बोधनमा 'सर' जोडेनौं भने समस्यामा पर्छौं । कवि राजा पुनियानी भारतीय नेपाली साहित्यमा देखिएको यो 'हाइरार्की'लाई समस्या मान्छन् ।
हामी पनि इन्द्रबहादुर राईलाई 'सर' भनिरहेका थियौँ ।
मलाई 'सर' भन्दा कुनै कम्पनीको मालिकजस्तो लाग्छ । कुनै नेताजस्तो । शासकजस्तो । हेपुवा, चलाक र सत्ताजस्तो लाग्छ । त्यो लाग्दै पनि भनिरहेका थियौं, "सर, हामी कविहरू हौँ ।"
उताका बैरागी काइँलाले जस्तो यताका इन्द्रबहादुर राईले नयाँ पुस्तालाई चिन्दैनन् । केहीबाहेक । यसो त तिनी बूढा भए । तिनी बिस्तारै चिन्न नसक्ने आँखाका पनि भए । सुन्न नसक्ने कानका पनि भए । तर, बोल्न नसक्ने मुखका भइहालेका छैनन् । विचार्न नसक्ने बुद्धिका भइहालेका छैनन् । इन्द्रबहादुर राईको घरैमा अघिल्लो पुस्ताका कवि सञ्जय वान्तवाको 'इन्द्रबहादुर राईले मेरो कविता पढ्दैनन्' र जस योञ्जन प्यासीको 'चाहिँदैन इन्द्रबहादुर राईको कथा' कविता सम्झिरहेको थिएँ । किन हँ?
अचेलका युवा कविहरू (सप्पै होइनन्) अलिक बढी अटेरी, अशिष्ट, अराजक र ढिट देखिन्छन् । त्यो उनीहरूको कविताको स्वभावले पनि बताउँछ । उनीहरू कला पनि चिन्छन्, विचार पनि । जीवन पनि चिन्छन् अनि सत्ता पनि । अध्ययनशील पनि छन् र विचारशील पनि । धेरचाहिँ सपनाशील छन् । यिनीहरूले इन्द्रबहादुर राईको 'सम्पूर्णता' लेख्ने आयामलाई 'अपूर्ण' र 'भ्रम' बताउने लीलालाई 'भ्रामक' मान्छन् । यी कुरा सम्पूर्ण मानिसहरुको निम्ति होइन, एकमुठी मानिसका कुरा हुन् । सम्पूर्ण मानिसलाई प्रबुद्ध बनाउनको निम्ति होइन, केही मानिसका बौद्धिक विलासका कुरा हुन् । यी कुरा साबित गर्न उनीहरूसित तथ्य पनि छ र तर्क पनि । उनीहरूसित विचारको फेदमा 'मानिस' छन् । नि:सन्देह ती मानिस 'भारतका नेपाली' र 'विश्वासमाजका मानिस' दुवै एकैचोटि हो । कतिले उनीहरूलाई कम्युनिस्ट देख्छन् । कतिले प्रतिरोधी चेतका र कतिले अराजक चेतका । कतिले चाहिँ बेकारका । यसोचाहिँ तर उनीहरू रहरले भएका होइनन् । विलासी साहित्य, केन्द्र र राज्य सत्ता, चियाबारीका मालिक र बजारले बनाएको हो । यसकारण उनीहरूले इन्द्रबहादुर राईबारे आलोचना गर्दा धेरैले 'विरोधी' देख्छन् ।
एउटा जडतामाथि आलोचना गरेर नै, अन्वेषण गरेर नै अर्को बाटो बनिन्छ । जे गरे पनि जस्तै लेखे पनि, जस्तै विचारे पनि जम्मै उत्तराधुनिकता र वादको प्रभाव हो, मान्ने पारम्परिकचेत काम लाग्दैन दार्जीलिङमा । यो सोच गलत पनि हुन सक्छ । छानबिन गर्न आलोचना, बहस चाहिन्छ । त्यसैको प्रयासमा छन् ती कविहरू पनि । इन्द्रबहादुर राई अझसम्म एउटा डिस्कोर्स हुन् नै । लेखक इन्द्रबहादुर राईलाई हामी सधैँ सम्मान गर्छौं । विचारक इन्द्रबहादुर राईका केही विचारहरूमा चाहिँ आपत्ति पनि जनाउँछौं । यति त हुनै पऱ्यो नि ।
"यो रुख बाङ्गो छ कि सीधा ?" कथा जमानाका हामी रहेनौं । राईले मानून्/नमानून्, हाम्रो विचारको केन्द्र 'सामूहिक प्रतिबद्धता' नै हो लेखनमा ।
र, तिनलाई गरिने प्रश्नहरू त्यही धारबाट बनिन स्वाभाविक हो ।
दीपक सापकोटाले पठाइदिएका 'निर्बन्ध मोन्टाज' र 'पाण्डुलिपि' झोलामा छन् । मनमा चाहिँ 'पाण्डुलिपि'को एउटा अङ्कलाई 'इन्द्रबहादुर राई विशेष' बनाउने सापकोटाको सपना । नीमाले रेकर्डर बोकेका छन् । मैले प्रश्नहरू तयार गरेको छु डायरीमा ।
मैले इन्द्रबहादुर राईलाई श्याम ब्रदर्शले गरेको एउटा 'टक–शो' मा पाएको हुँ पहिलोपल्ट सन् २००७ मा । त्यो वार्षिक वार्तामालाको कार्यक्रम थियो । त्यहीँ तिनले गरेको अध्ययनअनुसारको 'उत्तराधुनिकताले केन्द्र नमान्ने र पुँजीवादको विरोध गर्ने' विचार सुनेको हुँ । त्यहीँ 'उत्तराधुनिकता कहिल्यै बित्दैन' भन्ने तिनको तर्क पनि सुनेको हुँ । यो तिनको विचारमाथिको विश्वास थियो । आफूले चलाउने विचारमाथिको विश्वास कत्ति हुनुपर्छ ? त्यसैको उदाहरण थियो त्यो वार्ता । तिनी उत्तराधुनिकतावादका डाइहार्ड फलोवर हुन् । तिनले नेपाली साहित्यमा जत्ति पनि चलखेल गरे, नागार्जुन, क्युबिज्म र विनिर्माणबाट झिकेका थोकहरूलाई हतियार बनाएर गरे । नेपाली राइटिङलाई तिनले नयाँ फर्म दिए । चर्चित भए । तिनीजत्ति अध्ययनशील, ज्ञानी र ट्यालेन्टेड सर्जक कोही छैनन् । यो मेरो निजी किटान हो ।
उत्तराधुनिकता कहीँबाट आउँछ कि त्यहीँ हुन्छ ? त्यो त म जान्दिनँ तर "दार्जीलिङको जीवनमा उत्तराधुनिकता आयो के त ?" तिनले भनेका थिए, "अब आफूमा परिवर्तन जाँच्नुपर्छ ।"
तिनले जाँचेका कुरा मानिसमा आइरहेको परिवर्तन थियो । कर्पोरेट्सको चलखेल, नवउदारवाद, भूमण्डलीकरण र बजारवादले समाजलाई दिएको प्रभाव नै उत्तराधुनिकता हो ? सुनेर यस्तो लागेथ्यो मलाई ।
"पुर्खा शुद्ध नेपाली थिए," तिनले भनेका थिए, "अहिले मिश्रित, विस्तृत छौं । अन्य ठाउँको समाज हामीमा पस्यो ।"
मलाई लाग्छ, त्यो पसेको अरूको समाजलाई स्वीकार गर्ने कि आफ्नो समाजलाई बचाउने ? शायद वैचारिक विभेद यसैमा हो । स्वीकार्ने कि नकार्ने ? यही दुई अप्सन रहेको समाज त्यही दार्जीलिङमा पनि छ ।
स्वीकार्नेहरू इन्द्रबहादुर राईहरू परे, नकार्नेहरूको पक्षमा हामी ?
त्यो त पछि नै थाहा पाइएला, अहिले सङ्केतहरू मात्र, केही धमिला शङ्का छोडिराखौँ ।
भ्यानगगको जुत्ताको चित्रको उदाहरण दिँदै हामी स्रोतालाई दार्जीलिङमा इन्द्रबहादुर राईले उत्तराधुनिकता चिनाइरेहका थिए । भ्यानगगको त्यो जुत्ता, फाटेको, हिलोमैलो लागेकोले 'क्लास' चिनाउने र अहिलेका हजारौं कम्पनीहरूबाट बनिएको जुत्ताको फोटोले कुनै क्लास नचिनाउने तिनको तर्क थियो । "भ्यानगगको जुत्तामा फिलिङ र मिनिङ दुबै थियो," तिनले भनेका थिए, "अहिले फिलिङ मात्र छ, मिनिङ छैन ।"
त्यो हराइरहेको 'मिनिङ'को खोजीमा लाग्नुपर्ने हो कि ? लागिरहेको बेला कुरा गर्दै तिनले साहित्यको 'निश्चित अर्थ नरहेको' र उत्तराधुनिकतावादलाई प्यास्ट्रिज (सप्पै हालेको) बताएर टुङ्ग्याएपछि मेरो विचारका केही तार अवश्यै हल्लिएको थियो ।
त्यसरी कुरा गर्न जानेका राईलाई पढ्दै आइरहेका हामीले भने 'फेस टु फेस' भेटेका थिएनौं । जीवनमा पहिलोपल्ट इन्द्रबहादुर राई भेटिरहेका थियौँ । त्यो अवसरका बहाना थिए 'पाण्डुलिपि'का सम्पादक दीपक सापकोटा ।
हामीलाई चिनिसकेपछि इन्द्रबहादुर राईले आँखा बन्द गरे । एउटा आँखामा बारम्बार कचेरा निस्किबस्ने । तिनले पुछिबस्ने ।
नीमाले हाम्रो परिचय गराएपछि तिनले भने, "मनोज बोगटीहरू... ए… अस्ति काठमाडौं जाने ?"
यतिखेर पो दङ्ग पऱ्यौं । खबर त राख्दारहेछन् । अघिल्लो दिन तिनलाई भेट्न पुगेका एक साहित्यिक टोलीले जानकारी दियो कि ? नत्र कसरी थाहा पाए तिनले हामी काठमाडौँ गएको ?
"हाम्रो काइँला के गर्दैरहेछन् ?" सोधे ।
"हामीले हाम्रै कायक्रममा देख्यौं । बोल्नु पनि भयो । यत्ति हो जानेको ।"
तिनी डेढ वर्ष भयो नेपाल नछिरेको । पहिले त फोनबाट तिनको कुरा हुन्थ्यो काइँलासित । अहिले पैसा धेर खर्च गरेर नबोल्ने भइसकेका छन् । तिनले त नेपाल नजानेसमेत प्रण गरिसकेका छन् ।
"पटक्कै नजाने म त नेपाल," तिनले भने, "दुई किसिमको समस्या हुन्छ । एक उमेर नै उस्तो । घर जस्तो हुँदैन, बस्नु–खानु । अर्को, रातदिन साहित्यिक काम गर्छन् त्यहाँ, भ्याउनै गाह्रो ।"
राति १ बजे पनि अन्तर्वार्ता, बिहान सात बजे पनि । तिनलाई नेपालमा चाहिएको भन्दा बढ्ता साहित्यिक काम भएको लाग्छ । झिँझेट लाग्छ तिनलाई । इन्द्रबहादुर राईलाई आफूले चाहेको काम गर्न नदिएकोमा झर्को लाग्छ । तिनलाई अन्तर्वार्ता लिएको पनि मन पर्दैन अचेल । कसैको स्मृतिमा लेखेको पनि मर्दैन । "अस्ति प्रभुदानन्द स्वामी, त्यसपछि शरद छेत्री, हाइमनदास राईबारे लेखेँ," तिनले झर्को सुनाए, "आज पनि डा. कुमार प्रधानबारे लेखें ।" तिनलाई यस्ता लेखनहरूले अल्झाइरहेको छ ।
"आफ्नो लाइनको, विचारको, त्यही विचारलाई पछ्याउँदै गएर भेटेको ज्ञान, कुरा लेख्नै पाइँदैन," सुनाए तिनले, "अब लेख्दिनँ भन्नु गाह्रो । अब चाहिँ एउटा लेखेको २ हजार लिन्छु भनौं लागेको छ । यसो भन्दा नलेख भन्छन् कि ?"
यस्तो कठिन स्थितिमा मैले दीपक सापकोटाको सपनाबारे बताएँ । दीपक सापकोटाले इन्द्रबहादुर राईले लेखेको पैसा दिन्छन् कि दिँदैनन् ? यतिखेर मैले सोच्नुपर्ने कुरा यही थियो ।
"कसले लिने अन्तर्वार्ता ?" सोधे तिनले ।
"हामी लिन्छौं । रेकर्डर ल्याएका छौं । प्रश्न ल्याएका छौं । कुरा गर्दै जाऔं, हुन्न र ?" भन्यौं ।
तिनले त तीनपल्ट भने, "हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन ।"
तिनलाई लागेको छ, यसरी गरेको अन्तर्वार्ता राम्रो हुँदैन । नयाँ के–के निस्किएको छ, तीबारे आफू बोल्न सकिन्न । तिनले भनेको जस्तो, चाहेको जस्तो हुँदैन । इन्कार गरे इन्द्रबहादुर राईले ।
"प्रश्नहरू लिखित होस्, पुराना नयाँ लेखकहरूबारे केही, केही साहित्यका अरू कुरा होस्," तिनीसित विकल्प पनि थियो, "पढ्नेले केही नयाँ, राम्रो कुरा पाओस् । राम्रो होस् । हतार नगरौं ।"
दीपकजी, यसरी चाहेको गर्न पाइएन ।
"हो, फेरि अर्को त्यस्तै काम आयो है । आफ्नो काम गर्न देऊ न भन्छौं, यस्तो आइलाग्छ," यतिखेर तिनले यसो भनिदिए, "बरू 'पाण्डुलिपि'को त्यो अङ्कको योजना यता–उता गरेर ड्रप गरौं न ।"
तिनलाई हेरेँ, टाउको झुकाएर कसैलाई नहेरी, आँखा चिम्म गरी, एक-एकवटा शब्द विचार्दै बोलिरहेका थिए । यत्रो उमेरमा आफूलाई किन यसरी स्ट्रेस दिएका होलान् ? तिनमा आफूले बोल्दा राम्रोसित, ठिक्कको, चाहिनेमात्र बोल्नुपर्छ भन्ने चेत छ । अर्कोतिर विशेषाङ्कहरूतिर तिनको मोह छैन । यी सबै तिनको लागि अल्झो हुन् । तिनी केही आफ्नै विचारको नयाँ थोक लेख्न चाहन्छन् । के छ त तिनीभित्र यतिखेर ?
इन्द्रबहादुर राई चुपचाप बस्न चाहन्छन् ।
तिनी यतिखेर मृत्युचिन्तामा छन् । मरेपछि आफूले केही लैजान नपाउने कुरामा चिन्तित छन् । तिनीसित ज्ञानको भण्डार छ, त्यो पनि तिनीसित जाँदैन । साहित्यबारेका चिन्तनहरू छन्, त्यो पनि तिनीसित जाँदैन । नाम, यश छ- त्यो पनि तिनीसित जाँदैन । सत्कार, इज्जत छ- त्यो पनि तिनीसित जाँदैन । के जान्छ त इन्द्रबहादुर राईसित ? केही पनि जाँदैन ।
तिनलाई लाग्छ, मरेपछि मानिसले के के लान्छ ?
"अस्ति एउटा विचार मनमा आयो," तिनी भन्दै जान्छन्, "मरेपछि आफूले केही लाँदैन, सबैले भन्छन् । त्यही कुरा आफूले सोच्दा गहिरिनु पऱ्यो म । भौतिक कुरा केही जाँदैनन् । हजारको नोट, टेबल, चौकी केही पनि । हिन्दू धर्मले भनेको छ, ज्ञान पनि भौतिक हो । म ठूलो इतिहासकार हुँ भने, त्यसको ज्ञान पनि शरीरदेखि वियक्त हुन्छ । ज्ञान पनि जाँदैन । इमोशन, फिलिङ्स ? के यो पनि भौतिक हो ? माया लाग्नु, रिस उठ्नु भौतिक हो ? सोचौं त एकछिन, मर्नासाथ कस्तो हुन्छौं त ?"
नीमाले थपे, "ढुङ्गाजस्तो ।"
"शायद मरेपछि यही कोठामा घुमिबस्छौं होला," राई अझ गम्भीर भए, "ए म त मरेछु भन्ने याद हुन्छ । माया पनि लाग्दैन । रुँदै रहेछ मत्तै लाग्छ ।" तिनी यस्तो अवस्थालाई प्रकृत अवस्था मान्छन् । संसारमा आउँदा अप्राकृतिक कुराहरू जोडिन्छन् ।
"विचार गर्दै जाँदा म त साधु सन्तजस्तो पो हुन्छु त," तिनले निष्कर्ष निकाले, "अनि यस्तो भएपछि के लेख्नु पनि । किन पो लेख्नु पनि ।"
तर, यो निष्कर्ष मलाई मन परेन ।
"लेखेको त रहन्छ नि," मैले भनें, "मान्छे पो रहन्न त ।"
यसको जवाफ पनि तिनीसित थियो । "अरूको लागि पो रहन्छ, आफ्नो लागि चाहिँ ? आफ्नो लागि त नबस्दो रहेछ," भने, "अनि यस्तो ज्ञान पाएपछि के लेख्नु र ? त्यही धनीले गरिबलाई शोषण गऱ्यो । लोग्नेले स्वास्नीलाई हेला गऱ्यो, नारीवादी… यस्तो त के लेख्नु पनि हौ ।"
लीला लेखनलाई अध्यात्मसित जोडेर हेर्ने आलोचकहरू पनि छन् । गीताका केही पात्रका उदाहरण तिनी आफैँले पनि दिएका छन् । साहित्य नै रहेको गीताका कृष्ण लीलामा तिनले विनिर्माणका झल्को पाउँथे । पढन्ते थिए तिनी । विनिर्माण नभनी तिनले 'कठपुललीको मन' लेखिदिए । बाइस बुँदामा मात्र तिनले विनिर्माण शब्द लेखे । चामे र गौंथलीको अरू पाटो लेखिदिए । परम सत्य (एब्सोल्युट ट्रुथ) छैन भन्ने कुराको खोजीमा लागेका राईले आफूलाई सन्त पाउनु स्वाभाविक हो ।
यी जम्मै बताइराखेर राईले यही कुरा भन्न चाहन्थे कि यतिखेर तिनलाई केही खास लेख्ने इच्छा छ । केही नयाँ लेख्ने रहर छ । फरक लेख्ने योजना पनि छ । तिनले म्याथ्यु आर्नोल्ड सम्झे । इलियटले म्याथुबारे लेखेका छन्, के के कुरा आफ्नो साहित्यमा छैन भनेर खोज्दै देखाउँदा नै तिनले 'आफ्नो विचार' केही लेख्नै पाएनन् । राईलाई पनि अहिले यस्तै लागेको छ । के–केहरू लेख्दा लेख्दै 'आफ्नो विचार'को केही लेख्नै नपाइरहेको पीडा तिनीसित यो उमेरसम्म छ ।
"म्याथ्यु आलोचक त थिए तर पनि तिनी आलोचक होइनन्," भने तिनले, "यस्तै अल्झोले नै त होला ।"
इन्द्रबहादुर राईले सन् १९६५ मा प्रकाशित गरेको उपन्यास 'आज रमिता छ'को भूमिकामा साहित्यले दुईवटा कुराको अध्ययन गर्ने बताएका हुन् । त्यो अध्ययन क्षेत्र 'जीवन र जगत' थियो । पछिका आलोचकहरूले यही कुरा भेट्टाए । जीवन र जगतको कुरा राईले म्याथ्युको 'एसेस एन्ड क्रिटिसिज्म'बाट झिकेका थिए । आलोचकहरू बोक्रे भएकोमा तिनको चिन्ता छ ।
"नयाँ कुरा खोतल्ने काम नै भएको छैन," भन्छन् तिनी, "अचेलका आलोचकहरू पढ्दैनन् । कृतिमा त्यही जीवन र जगतको कुरा छ मत्तै भनिबस्छन् ।"
तिनले आलोचकहरूमाथि गर्ने यतिखेर एउटा प्रश्न छ, "के पोस्टमोर्डनिज्मले साहित्यको दुईवटा अध्ययन क्षेत्र 'जीवन र जगत'लाई नै बताउँछ ?"
त्यो धारणा भत्किएको थाहा नपाउने आलोचकहरू तिनलाई मन पर्दैन । "पोस्टमोर्डनिज्मले त स्टडी अफ नलेज भन्छ," आलोचकहरूलाई तिनको टिप्स छ, "आफूले विश्वास गरेको ज्ञान के हो त्यो चिन्नु, कस्तो ज्ञान हो बुझ्नु, खै त ?"
इन्द्रबहादुर राईलाई सुनिबस्दा लाग्थ्यो, तिनी अब थाकेका हुन् । मनमा विचार अनेक आउँछन् तर ती जम्मैलाई मिलाएर लेख्न पाउँदैनन् । उमेर पाको भइसकेकोले घरैमा बस्ने मनको भएका छन् तिनी । लेख्न पनि काँप्दै लेख्दा हुन् । कसरी पढ्दा हुन् आँशु निस्किबस्ने आँखाले किताबहरू ? माया लाग्ने मानिस भएका छन् इन्द्रबहादुर राई । कतै जान पनि तिनलाई मन लाग्दैन । कतै बोल्न पनि मन लाग्दैन । करैले जान्छन्, करैले बोल्छन् । यस्तो लाग्छ, तिनलाई सुन्दा । गइरहेकै छन् तिनी कार्यक्रमतिर, बोलिरहेकै छन् तर नेपालचाहिँ जान्छन् कि जाँदैनन् कुन्नि ?
"खै घनश्याम नेपाल कुनै प्रोग्राममा जाँदैनन् त, कसैले अह्राएको पनि लेख्दैनन् त । पढ्छन्, बस्छन् । आफ्नै विचारको लेख्छन्," उदाहरण पनि छ तिनीसित, "यसै गर्नु रहेछ । उमेर पुगेपछि ज्ञान आउँदो रहेछ ।"
तिनी आफूले चाहेको, खोजेको, रोजेको किताब पढ्न पाउँदैनन् । राम्रा किताबहरू बजारभरि होला र 'म छुटिँदैछु'ले तिनलाई सताउँछ ।
"म त नानीहरूले ल्याइदिएको खान्छु । उनीहरूले मन पराएको लुगा लाउँछु," उदाहरण पनि दिन्छन् र भन्छन्, "म अरूको चोइसको भइसकें ।"
व्यक्ति इन्द्रबहादुर राई लेखकहरूको अभिभावक हुन् । लेखक इन्द्रबहादुर राई पनि लेखकहरूका अभिभावक हुन् ? योचाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, तिनलाई कसैले आवश्यकताभन्दा ज्यादा उचालेको पनि मन पर्दैन, बिनातर्क झारेको पनि मन पर्दैन । तिनलाई 'तेस्रो आयाम' र 'लीला लेखन' अझै पनि सान्दर्भिक लाग्छन् । दुई लेखनभित्र विचारका अन्य पाटोहरूको सम्भावना छोडिराखेको लाग्छ । पोस्टमोर्डनिज्मले सम्पूर्ण सङ्कथनको निम्ति स्पेस खुला राखेजस्तै । अचेल केही खास लेख्ने मुडमा पनि छन् । यस्तोमा विभिन्न अल्झोमा पार्नु अपराध नै होला ।
तर, दीपकजीको फरमान मैले मान्नु थियो । तिनलाई झिँजो लाग्छ, जानेर पनि । तिनको विचार लेखनमा बाधक भएँ, बुझेर पनि । तरै पनि तत्काल अन्तर्वार्तालाई तीनपल्ट 'हुँदैन हुँदैन हुँदैन' भनेपछि तिनैले दिएको आइडियाअनुसार पठाएँ २२ वटा प्रश्नहरू । जसमा तिनले केही प्रश्नका उत्तर दिए आधा–आधा, केहीको त दिँदै दिएनन् ।
उत्तरले बताउँछ, यस्तो झुर प्रश्न पनि गर्ने हो इन्द्रबहादुर राईलाई ?
(दीपक सापकोटाद्वारा सम्पादित 'पाण्डुलिपि' साहित्यिक मासिकको वर्ष १, अंक ४ बाट)